Kuongorora kweiyo nyowani Amazon Echo Plus, imba otomatiki ine akanyanya kurira simba | Gadget nhau
Kuongorora kweiyo nyowani Amazon Echo Plus, imba otomatiki ine akanyanya kurira simba
Karim Hmeidan | | Accessories, Vatauri
Mushure mekumhara muSpain, hapana munhu anogona kuramba izvozvo Alexa a yakareruka makore kubva kune vamwe vayo vakwikwidzi muSpain. Zvese zvinofanirwa kutaurwa, Alexa ichine nzira refu yekuenda kuSpain, asi sekutaura kwedu zviri kune chero mukwikwidzi. Uye mushure mekucherechedzwa kupfupi uku, isu tinoenderera mberi nemuyedzo wedu wevatauri vese vanoumba iyo Amazon Echo renji, maAmazon smart speaker.
Uye pamwe Mazhinji ekusahadzika kwauinako pakusarudza imwe kana imwe ane iyo Amazon Echo Plus seye protagonist, mutauri wepamusoro-we-wepakati wemhuri yeAmazon Echo, saka ngatiedzei kuyedza kubvisa kusahadzika kwako ... Mushure mekusvetuka tinokupa zvese izvo zvakaita iyi nyowani Amazon Echo Plus, YeAmazon yepamusoro-ye-iyo-mutsara smart mutauri, mutauri uyo inovanza zvakanyanya kupfuura izvo zvatinogona kupihwa nemutauri wenguva dzose nemutengo mumwe chete ...
Sezvo nevatauri vese mumhuri yeAmazon Echo, iyo Amazon Echo Plus inotiratidza rin'i inopenya kumusoro, iyi mhete inotiratidza chinzvimbo che Alexa, kugona ona zvakajeka apo Alexa ari kutiona patiri kutaura naye (Mumufananidzo uri pamusoro apa unogona kuona nzvimbo yegirazi yebhuruu inoratidza chinzvimbo chedu nekuremekedza iyo Amazon Echo Plus). Kusiyana neAmazon Echo Dot, mune iyi kesi tine mamaikorofoni manomwe: 6 maikorofoni ekutaurirana nawo neA Alexa, uye maikorofoni iyo inodzima ruzha kana tiri kutamba mimhanzi uye isu tinoda kutaura neA Alexa.
Iyo Amazon Echo Plus ine yakasimba dhizaini, inotiyeuchidza nezveApple's HomePod kuchengetedza daro. Yakatenderedzwa profiles, hapana kushambadzira, uye huremu hunogamuchirwa hunovanza mutauri 76mm woofer uye 20mm tweeter. Inzwi rinopfuura rinogamuchirwa rinozadza imba isina matambudziko, senge yako yekutandarira, gare gare ini ndinodzoka kuzonunura nyaya yezwi ...
1 Chigadzirwa chinoita kuti imba yedu inyatsonzwisisa
2 Amazon Echo vs Amazon Echo Uyezve
3 Ndekupi kwekutenga iyo nyowani Amazon Echo Plus?
Chigadzirwa chinoita kuti imba yedu inyatsonzwisisa
Chikamu chinonakidza cheiyi Amazon Echo Plus ndechekuti mukati mayo mune digitaalinen imba mutungamiriri neZigbee tekinoroji (pamusoro peiyo thermometer iyo yainoshandisa kumba michina inoshanda). Kubata Zigbee tekinoroji inoita iyi nyowani Amazon Echo Plus inokwanisa chengetedza chero chinhu chakangwara yatinayo mumba medu, nezvakanakisisa zvacho; hapana echitatu-bato mahabhu kana mabhirijindiko kuti, isu tinodzivisa kuisa mamwe madhiraivha.
Smart thermostats, smart plugs, kana anozivikanwa maPhillips Hue mababu, kana kunyangwe iwo anobva kuIkea, inowirirana neiyi nyowani Amazon Echo Plus. Ichi ndicho chokwadi chikamu charo chinosiyanisa, uye kana iwe uri kufunga kuve echokwadi mafraki ezvigadzirwa zvehungwaru, usazeze kuwana iyi Amazon Echo Plus. Hunhu hwayo hwakadaro Amazon inoitengesera nePhillips Hue smart bulb, uye yeuka: hauzodi iyo Phillips Hue zambuko.
Imwe poindi yekukoshesa nezve iyi Amazon Echo Plus ndeyekuti mune ino kesi iyo minijack port yatinowana kumashure inogona kumisikidzwa senge odhiyo yekuisa kana kuburitsa, mune mamwe ma speaker eAmazon inogona kungoshandiswa sekuburitsa ruzha, mune iyi nyaya tinogona zvakare kubatanidza chero mutambi ne minijack uye kushandisa iyo Amazon Echo Plus semutauri (kuburikidza neBluetooth, chero mutauri weAmazon anogona kushandiswa semutauri wekunze ).
Amazon Echo vs Amazon Echo Uyezve
Uye amai vekusahadzika kwese, Amazon Echo Plus kana Amazon Echo? Zvese zvinoenderana nezvinodiwa, kana chaunoda chiri mutauri wekuteerera kumumhanzi wako uye kushandisa Alexa semubatsiri chete wekuseta zviyeuchidzo nezvimwe ... hapana musiyano mukuru maererano nezwi reimwe uye imwe.
Iyo Amazon Echo Plus, sezvandambotaura, ndiyo yega iri mumutsara iyo ine iyo digitaalinen imba mutongi, uyu ndiwo musiyano wayo mukuru. Ehe, ine hurukuro dzakakura kupfuura iyo Amazon Echo, asi isu tiri kutaura nezvevamwe madiki masipika ayo anomboita mutsauko pakati peimwe ruzha uye rwumwe. Sarudzo yeramangwana inoitikawo kwandiri, asi isu tatoziva kuti nhasi hatigone kubheja kuti Amazon haivandudze vatauri nekusunungura chizvarwa chitsva munguva pfupi yenguva.
Ndekupi kwekutenga iyo nyowani Amazon Echo Plus?
Zvingave zvishoma sei, Unogona kuwana iyi Amazon Echo Plus paAmazon (Yakakodzera iyo redundancy), isu hatizive kana ichazotengeswa muchitoro chemuviri asi sekuziva kwako, iko kutenga kuAmazon kuri nyore. Kuwana chinongedzo chinotevera: Hapana zvigadzirwa zvakawanikwa., unogona tora zvese mutauri weAmazon Echo Plus uye iyo Philips Hue White smart bulb ine E27 socket saka iwe unogona kuwana iyo yakazara smart system.
Iyo pack inogona kunge iine mutengo we169,08 euros, asi nekutenda kuvhurwa kweAmazon Echo ruzhinji rwevatauri muSpain, ikozvino unayo pane inosimudzira mutengo we89,99 euros, mutengo wakanaka chaizvo tichifunga kuti takatora yepamhepo-ye-iyo-mutauri weAmazon, pamwe neiyi smart bulb iyo ndeimwe yepamusoro pamusika. Kana iwe uchida kukwakuka kune vabatsiri vezwi repamba, usazeze kutora mukana pane izvi zvinopihwa neAmazon neayo maEcho speaker.
Chipo chinosanganisira Phillips Hue bulb
Zigbee processor kudzora akachenjera michina
Zvemukati zvemukati nekuda kwehukuru
Dzimwe nguva inoenda zvakakomba
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Mufananidzo uye kurira » Vatauri » Kuongorora kweiyo nyowani Amazon Echo Plus, imba otomatiki ine akanyanya kurira simba
Maitiro ekurodha pasi vhidhiyo kubva Instagram